IHOTELE YOKUBONA ELULA, MBARARA
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMiria
· Amagumbi okulala ayi-50
· Iibhafu eziyi-50
Enye yeenketho zethu eziphezulu eMbarara.
IseMbarara, 300 m ukusuka kwiMarike yaseMbarara, iEasy View Hotel ibonelela ngendawo yokuhlala enendawo yokutyela, indawo yokupaka yabucala kunye nebhari. Indawo yokulala ibonelela ngedesika engaphambili yeeyure ezingama-24, inkonzo yegumbi kunye nokugcinwa kwemithwalo yeendwendwe.
Onke amagumbi eendwendwe ehotele eza nendawo yokuhlala, iTV enescreen esisicaba esineetshaneli zesathelayithi kunye negumbi lokuhlambela labucala elinezindlu zangasese zasimahla kunye neshawari. Zonke iiyunithi zinedesika.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1
Isikhululo sebhasi saseMbarara sikwi-500 m ukusuka kwindawo yokuhlala, ngelixa iYunivesithi yaseMbarara yeSayensi kunye neTekhnoloji i-1.6 km ukusuka kwipropati.
Umbuki zindwendwe ngu- Miria
I-Continental kunye ne-Full IsiNgesi / iinketho zesidlo sakusasa sase-Irish zifumaneka rhoqo kusasa kwi-Easy View Hotel.